China Automobile lampshade jekiseni kuumbwa Mugadziri uye mutengesi | Mestech
Zvikamu zvepurasitiki zvemota
Plastic jekiseni Kuumbwa inowanzo shandiswa pamota mwenje. Rambi chinhu chakakosha pamotokari. Automobile lampshade ndechimwe chezvakanyanya kunyatso jekiseni kuumba zvikamu mumotokari. Iyo mota lampshade jekiseni kuumbwa kwakakosha kwazvo
Iwo marambi akakosha zvikamu mumotokari. Automobile lampshade ndechimwe chezvakanyanya kujeka jekiseni kuumba zvikamu mumotokari. Jekiseni kuumbwa kwemotokari mwenje unodzivirira ine kukosha kwakakosha.
Rambi ndiyo chiratidzo, kuvhenekera uye kuratidza system pamotokari, uye iri sisitimu yakakosha pamotokari. Kunze kweiyo LED wick, mwenje wemwenje, mwenje wekubata uye dzimba dzose jekiseni rakaumbwa zvikamu.
Mazuva ano, indasitiri yekugadzira mota inogadzirwa zvakanyanya. Chimiro cherambi chinowirirana nechimiro chemota yese, uye chinosimbisa chimiro chakanaka uye chisina kusimba. Iyi mhando yechimiro chakaomarara chemwenje haigone kuitwa negirazi zvinhu. Kubuda kwepurasitiki nyowani polycarbonate PC (polycarbonate) inosangana nezvinodiwa zvechiedza kutapurirana, simba, kuomarara uye kusagadzikana kwemamiriro ekunze. Saka PC jekiseni Kuumbwa mota mwenje mumvuri unoshandiswa zvakanyanya mumotokari indasitiri.
Rambi rinobata uye mwenje dzimba hazvisi zvekunze zvikamu. Kazhinji PP + TD20 inoshandiswa, iyo inoda zvakaderera zvinodiwa pane mwenje mumvuri. Iko hakuna kwekutarisa pano.
Marambi emota anonyanya kusanganisira anotevera marudzi:
Rutivi rwekumaka mwenje
3RD mabhureki emarambi
Masuo egirazi emagetsi
Masikati nguva kumhanya marambi
Dzosera-kumusoro / dzokorora marambi
Magetsi emagetsi erori
Magetsi emagetsi emidhudhudhu
Motokari Mwenje uye Zvikamu zvePurasitiki
Rambi remotokari pacharo rakaomarara muchimiro, rinoyevedza pakuonekwa, uye rakafumurwa kwenguva yakareba. Kunyanya, iyo jekiseni kumanikidza nguva yemamwe epamusoro-giredhi mwenje mumvuri mafuru akakwirira kwazvo. Panguva imwecheteyo, mumvuri wemwenje wakafumurwa kwenguva yakareba. Ruvara hupfu hwejekiseni kuumbwa, yakakwira giredhi yakajeka hupfu hwekutapira kwakanaka kwechiedza. Polycarbonate ine yakasimba kuomarara, yakasimba simba, yakasimba kuomarara, yakanaka anti-ultraviolet mwenje kutapurirana, anti-kukwegura kukanganisa, saka mwenje wemwenje uchiri kungochengeta wakanaka ruvara kujekesa uye zvemagetsi simba mushure mekushandisa kwenguva refu.
* Matipi maviri aunoda kuziva nezve mota mwenje dhizaini dhizaini uye chakuumbwa dhizaini
1) .Automobile mwenje mumvuri chikamu chaicho chaizvo. Iyo ine yakanyanya kudikanwa pane saizi yegungano, chimiro chechitarisiko, mhando yepamusoro uye hunhu hwemaziso. Izvi zvine zvakakwirira zvinodiwa kumwenje dhizaini dhizaini, kusarudzwa kwezvinhu, kufa mamiriro ezvinhu, kuumba tekinoroji uye tekinoroji tekinoroji. Mune dhizaini yekufa, dhizaini dhizaini yemota inofanirwa kuongororwa neforomaflow, uye chimiro chinofanira kukwidziridzwa kudzivirira shrinkage, clamping uye deformation inokonzerwa nehuswa shanduko uye isina musoro mamiriro.
2) .Iyo jekiseni muforoma yemwenje wemwenje inofanirwa kutora simbi ine saizi kukura, kukwirira kuomarara, kupfeka kuramba uye ngura kuramba, uye ita kuomesa kurapwa uye girazi kupedzisa. Mumhanyi anopisa kana anopisa mumhanyi sisitimu inoshandiswa kugunun'una jekiseni kuumba kubvisa jekiseni kuremara senge tembiricha, fusion mutsara uye kusagadzikana deformation.
Nei isu tichisarudza PC kugadzira mota malampu
Anenge ese marobhoti emota akagadzirwa nePC jekiseni kuumbwa. PC mapurasitiki ane pachena pachena, simba rakanaka uye kuomarara, uye zvirinani anti-ultraviolet kugona pane acrylic, kwete nyore kukwegura, yero uye kupera.
Pair yemotokari fog mwenje mwenje
YeMotokari parutivi pechiratidzo chemwenje
Mota muswe lampshade
Mota yekupaka mwenje
* Matipi matanhatu iwe aunofanirwa kuziva nezve jekiseni kuumbwa kwemota mwenje
1). Inokosha jekiseni Kuumbwa muchina inokurudzirwa yemotokari mwenje. Kana zvinhu zvinoverengeka kana mavara akagovaniswa, suka iyo jekiseni kuumbwa muchina kusvikira iwo wakachena ruvara wabuda. Panodiwa 25KG mbishi inodiwa.
2). Jekiseni Kuumbwa muchina inonyatsoiswa chisimbiso, guruva uye sundries muforoma, zvichikonzera kukwenya uye miviri yekunze, matema makwapa anonetsa kwazvo, uye chakuvhuvhu kupora kunonetsawo.
3). PC ine yakasimba electrostatic adsorption, saka inoda kuve yakagadzirirwa nepfuti yemagetsi kubvisa magetsi.
4). Sarudzo yeantirust mumiriri uye yekuchenesa foroma yakakosha. Usasarudze mafuta, sarudza yakaoma
5). Zvishandiso zvePC zvinofanirwa kusarudza mhando ye fluidity uye kugadzikana kwemavara.
6). PC inoda dehumidification uye kuomesa, 120 madhigiri kwemaawa mana.
* Pamusoro kurapwa kwemotokari epurasitiki mwenje.
Pane maviri makuru epamusoro maitiro eiyo mota marambi ekutsvaira aluminizing uye pamusoro pekupfira.
1). Kuisa saruminiyamu pamusoro pepurasitiki zvikamu hazvigone chete kupa epurasitiki zvikamu imwe simbi mameseji, asi zvakare kuratidza mwenje unoburitswa neyechiedza sosi segirazi. Naizvozvo, mune indasitiri yemarambi yekugadzira indasitiri, iko kushandiswa kwekutsvaira aruminiyamu yakanamirwa zvakanyanya.
2). Kumusoro kupfapfaidza: kunyanya kwekuratidzira kwepamusoro kwemotokari headlamp kavha.
Paint Hara pendi: mazhinji emota headlamp anovhara akagadzirwa nezvinhu zvePC. Iko pamusoro kwePC mwenje wemwenje kwakanyorovera mushure mekuumbwa, uye zvisaririra zviri pachena zvinogona kusiiwa nenzara. Mushure mekumwaya rukanda rwependi yakaoma pamusoro pekunze pePC mwenje wemwenje, iyo nzvimbo yakaoma uye inogona kudzivirira izvo zvishoma kukwenya.
② Antifogging bemhapemha: chinangwa chekumwaya antifogging kupfeka mukati mehushi remwenje ndiko kuwedzera kusanzwisisika kwemukati wepasi pechigadziko chemwenje, shandura madonhwe emvura mudiki kuita firimu remvura, kudzikisira kupenya kwechiedza uye kudzikisira mhute kugoverwa kwemwenje kwemarambi.
Mestech tave tichizvipira pachedu kune dhizaini, kugadzira uye jekiseni kuumbwa kwemarambi emota uye zvimwe zvakabatana zvikamu kwemakore mazhinji. Ndapota taura nesu.
Mould yemuswe wemwenje mumvuri
Mould yemumvuri wemwenje
Pashure: Structural hunhu jekiseni muforoma kuti motokari
Zvadaro: Zvinhu zvepurasitiki mumikova yemotokari
Zvikamu zvepurasitiki zvemwenje usina mumvuri